Budata Tor Browser 11.0.4 maka Windows
Ikpo okwu: Windows |dị: 11.0.4 Asụsụ: Bekee
Free Budata maka Windows (72.41 MB)
Budata Tor Browser,
Gịnị bụ Tor Browser?
Tor Browser bụ ihe nchọgharị intaneti a pụrụ ịdabere na ya maka ndị ọrụ kọmputa na-eche banyere nchekwa na nzuzo ha nịntanetị, iji chọgharịa na ịntanetị na-enweghị aha na ịnyagharịa site na iwepu ihe mgbochi niile na ụwa ịntanetị.
Akụrụngwa ahụ, nke na-arụ ọrụ dị ka ọta siri ike maka nchebe nke okporo ụzọ netwọkụ gị na ọnụọgụ mgbanwe data, nke enwere ike ledo ma ọ bụ nyochaa site na isi mmalite dị iche iche, na-ezokwa ozi ịntanetị gị na data ịntanetị na mgbakwunye na ịzobe ọnọdụ gị site na enyemaka nke ngwa na ngwa di iche iche.
Tor Browser, nke dabere na ntọala netwọkụ guzobere site na sava sava, na-enye gị ohere ịchọgharị na ịntanetị na-enweghị aha ma banye na saịtị ọ bụla ịchọrọ na-enweghị machibidoro ma ọ bụ gbochie ya. Ihe nchọgharị ahụ, nke gbanwere data na sava dị iche iche nụwa niile nokpuru iwu na algọridim dị iche iche, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịchụso nihi na ọ na-enweta okporo ụzọ niile site na isi mmalite dị iche iche.
Etu esi eji Nchọgharị Tor
Site niji ụdị Firefox a haziri ahazi, Tor nwere njirimara ọrụ dị mfe ma dị mfe iji nke a na-akpọ Vidalia. Nụzọ dị otu a, sọftụwia ahụ, nke ndị ọrụ ọkwa niile nwere ike iji rụọ ọrụ nke ọma, ga-amatakarị ndị ọrụ jiri Firefox mbụ.
Iji malite iji ihe nchọgharị gị mgbe usoro nrụnye dị mfe na enweghị nsogbu, ị ga-ebu ụzọ mee ntọala ntọala mpaghara dị mkpa ma ọ bụ jikọọ na netwọk Tor site na iji ntọala akpaka. Nwere ike ịrụ ọrụ ndị a site na ịpị aka ole na ole na interface ga-apụta mgbe echichi ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite iji Browser Tor, nke ga-emepe na-akpaghị aka mgbe ị jikọtara na netwọk Tor.
Mgbe anyị wetara atụmatụ ndị a niile anyị kpọkọtara ọnụ, Tor Browser bụ otu nime ihe nchọgharị weebụ kachasị dị irè ma nwee ntụkwasị obi ị nwere ike iji sọfụ ịntanetị kpamkpam ma nweta saịtị egbochi.
Gbochie nsuso ọrụ: Tor Browser na-eji njikọ dị iche maka saịtị ọ bụla ị gara. Yabụ, ọrụ nsuso na mgbasa ozi ndị ọzọ enweghị ike ịnakọta ozi gbasara gị site na ijikọ weebụsaịtị ị abanye. A na-ekpocha kuki na akụkọ ihe mere eme gị na-akpaghị aka mgbe ị mechara nchọgharị na weebụ.
Chebe megide nsuso: Nchọgharị Tor na-egbochi ndị mmadụ nwere ike ịdebe gị ịhụ saịtị ndị ị gara. Ha nwere ike ihu na ị na-eji Tor.
Guzogide mkpịsị aka ya: Tor Browser na-ezube ime ka ndị ọrụ niile yie otu ihe site na igbochi iwepụta akara mkpisiaka dijitalụ gị, nke nwere ike ịmata gị dabere na ihe nchọgharị na ozi ngwaọrụ.
Multi-oyi akwa izo ya ezo: Ka njikọ okporo ụzọ gị na-ebute site ná netwọk Tor, ọ gafere ụzọ atọ dị iche iche na-ezoro ezo oge ọ bụla. Usoro ntanetị nwere ọtụtụ puku sava ndị ọrụ afọ ofufo a maara dị ka Tor relays.
Gaa na freelyntanetị nenweghị ihe ọ bụla: Site na Tor Browser, ị nwere ike ịnweta saịtị nke ọ bụla nwere ike igbochi site na netwọk ị jikọtara.
Budata Tor Browser iji nweta nchọgharị na-akwụghị ụgwọ ebe ị nwere ike ichedo nzuzo onwe gị na-enweghị nsuso, nyocha ma ọ bụ igbochi.
Tor Browser Ụdịdị
Nha faịlụ: 72.41 MB
Kacha ọhụrụ na: 21-01-2022
Onye njikwa ọrụ nchekwa bụ onye njikwa nchekwa emebere ka ọ nye gị ozi zuru ezu gbasara usoro niile...
Ngwa TuneUp AVG Web dị netiti ngwa ị nwere ike iji mee ka ihe nchọgharị ịntanetị dị nchebe ma nye...
Windows 10 Njikwa Firewall pụtara dị ka ngwanrọ nchekwa ị nwere ike iji na kọmpụta desktọpụ gị. A...
Enwere ike ịkọwa ZHPCleaner dị ka mmemme nhicha ihe nchọgharị nke ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na...
Hichapụ bụ sọftụwia na -akwụghị ụgwọ yana nke ị nwere ike iji mepụta oghere nchekwa site na...
Ngwanrọ Mgbanwe DNS bụ mmemme dị mkpa dị ka ọrụ VPN na obodo anyị ebe a na -egbochi saịtị ịkparịta...
Enwere ike ịkọwa Dr.Web LinkChecker dị ka ngwa nchekwa ịntanetị na -enyere ndị ọrụ aka ịgagharị...
Alert Google Paswọdu bụ ndọtị Chrome mepere emepe na -echebe Google na ngwa Google gị maka akaụntụ...
Free Zoo IP bụ ihe nchekwa nzuzo nzuzo nke ị nwere ike zoo adreesị IP gị mgbe ị na-eme nchọgharị na...
Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ozi bara uru na ịntanetị, ọtụtụ weebụsaịtị abanyela ọnyà...
Site na Avira Premium Security Suite ọhụrụ, ọ gbanwere aha ya na Avira Internet Security. Avira...
Nchebe Ịntanetị BullGuard na -echebe kọmputa gị pụọ na mwakpo ịntanetị yana nchekwa zuru oke. Ọ na...
Obi iru ala mgbe ị na-eji kọmputa. Kedu maka mgbe ị na-ejikọ ịntanetị? Ọ bụrụ na ị na-achọ a nche...
Nchebe ịntanetị Avast bụ mmemme antivirus nke anyị nwere ike ịkwado ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye...
Surf Anonymous Free bụ sọftụwia nchekwa echekwara maka ndị ọrụ ịntanetị chọrọ ịmụrụ ihe ha na-eme...
httpres bụ ngwa njikwa webụsaịtị ewepụtara maka kọmputa desktọọpụ. Site na obere mmemme a, ị nwere...
Iwepụ paswọọdụ Google bụ ngwa dị mfe iji kpochapụ okwuntughe gị ngwa ngwa maka akaụntụ Google...
Na Comodo Internet Security, nke bụ njikọ Comodo Firewall, nke a hụrụ dịka otu mmemme firewall...
VirusTotal Scanner bụ sọftụwia efu nke ndị ọrụ kọmputa nwere ike iji VirusTotal nyochaa faịlụ ọ...
Nzuzo Eraser Free bụ mmemme dị oke elu yana nke zuru oke nke ị nwere ike iji hichapụ ihe omume...
Anti-Exploit bụ ngwa Malwarebytes mepụtara, onye mepụtara mmemme nchekwa na-aga nke ọma, ga-ahụ na...
Nchebe Crystal bụ mmemme dị mfe iji, na-aga nke ọma nke emepụtara iji chọpụta ngwa ngwa malware...
Bitdefender Internet Security 2017 bụ ngwa nchekwa nke jisiri ike nweta ihe nzere sọftụwia...
ESET Internet Security 2022 bụ mmemme nchekwa na-enye nchebe dị elu megide iyi egwu ịntanetị. Ọ...
Avast! Avast, ụlọ ọrụ na-eduga na ngwa nchekwa kọmputa Browser Cleanup! Ọ bụ ihe nchọgharị Cleaner...
Ihe nzuzo IP na-ezochi ezigbo IP nke ndị ọrụ, na-echebe gị pụọ na mwakpo nwere ike ịbịara na...